Izinkampani Ezihambayo Ukuthengisa Nokuqasha eFlorida
Izinkampani Ezihambayo in Miami
Izinkampani Ezihambayo in North Miami Beach
Ishicilelwe ngu All Around Moving Services
ukubuka Izinkampani Ezihambayo eshicilelwe 2 years ago
Ishicilelwe ngu OrangeMoversMiami
ukubuka Izinkampani Ezihambayo eshicilelwe 3 years ago
IFlorida ((lalela), isabizwana saseSpain: [floˈɾiða] siyisifundazwe esisenyakatho kakhulu e-United States. Umbuso uhlangane nentshonalanga yiGulf of Mexico, enyakatho-ntshonalanga yi-Alabama, enyakatho neGeorgia, empumalanga yi-Atlantic Ocean, futhi ngaseningizimu yiStraits of Florida. Inhlokodolobha yezwe, iThellahassee, yasungulwa kanjalo ngonyaka we-1823 ngeseshini yesibili yezishayamthetho zezwe. IFlorida iyidolobha lama-22-ebanzi kakhulu (65,755 sq mi noma i-170,300 km2), i-3-inabantu abaningi (21,477,737), kanye ne-8th enabantu abaningi (384.3 / sq mi noma i-148.4 / km2) yezwe lase-US. UJacksonville umasipala onabantu abaningi kakhulu esifundeni nedolobha elikhulu kunawo wonke ezindaweni ezihlangene zase-United States. Indawo yedolobha laseMiami iyindawo enamadolobha amaningi eFlorida. Umnotho waseFlorida we- $ 1.0 trillion ungowesine ngobukhulu e-United States. Ukube bekulizwe, iFlorida ibizoba ngumnotho we-16 ngobukhulu emhlabeni, bese kuthi iningi labo libe ngamashumi ayisishiyagalombili emhlabeni ngonyaka we-2018. Ngo-2017, umholo kahulumeni waseFlorida owawungenamuntu wawungu- $ 47,684, ubekwe kuma-26 ezweni lonke. Izinga labantu abangasebenzi ngoSepthemba 2018 lalingama-3.5% futhi labalwa njengele-18 e-United States. IFlorida ikhipha cishe amabhiliyoni angama-55 ezigidi zezimpahla ezenziwe esifundazweni, okuyisishiyagalombili eziphakeme kakhulu kuzo zonke izifundazwe. Indawo yedolobha laseMiami ingumnotho omkhulu kakhulu wasemadolobheni eFlorida futhi eyishumi nambili eMelika ine-GDP yamaRandi ayizigidi ezingama-345 ukusukela ngonyaka ka-2017. Lokhu kungaphezu kwesibalo esiphindwe kabili kwenombolo yendawo kamasipala olandelayo, iTampa Bay Area, ine-GDP yezigidigidi ezingama- $ 145 zamaRandi. IFlorida yikhaya labantu abayizigidigidi ezingama-51 emhlabeni futhi iningi labo lihlala eSouth Florida.Ukuxhumana kokuqala kwaseYurophu kwenziwa ngo-1513 ngumhloli wamazwe waseSpain uJuan Ponce de León, owayibiza ngokuthi yi-la Florida ([la floˈɾiða] "izwe lezimbali" ) lapho ifika lapho ngenkathi ye-Easter, eyaziwa ngeSpanishi njengoPascua Florida. IFlorida ibiyinselelo kumandla amakoloni aseYurophu ngaphambi kokuba i-United States ibe ngonyaka we-1845. Kwakuyindawo esemqoka yamaSeminole Wars ngokumelene namaMelika Omdabu, nokuhlukaniswa ngokobuhlanga ngemuva kweMpi Yezwe YaseMelika. Namuhla, iFlorida ihlukile ngomphakathi wayo omkhulu waseCuba wokuhamba kwabantu kanye nokukhula kwabantu abaningi, kanye nezinkinga zabo zemvelo ezandayo. Umnotho wombuso uncike kakhulu kwezokuvakasha, ezolimo kanye nokuhamba, okwaqalwa ngasekupheleni kwekhulu le-19. IFlorida yaziwa nangamapaki okuzijabulisa, izilimo zewolintshi, imifino ebusika, iKennedy Space Center, njengendawo ethandwayo yokuthatha umhlalaphansi. IFlorida iyisifundazwe esiphansi kunazo zonke e-United States. IChibi i-Okeechobee liyichibi elikhulu kunawo wonke lamanzi amnandi eFlorida. Ukusondela kakhulu kolwandle olwandle kuthonya izici eziningi zesiko laseFlorida nempilo yansuku zonke. IFlorida isibonakaliso samathonya namafa amaningi; Ama-heritages ase-Afrika, aseYurophu, abomdabu kanye neLatino angatholakala ekwakhiweni nasekudaleni. IFlorida idonsele ababhali abaningi abanjengoMarjorie Kinnan Rawlings, u-Ernest Hemingway noTennessee Williams, futhi iyaqhubeka nokuheha osaziwayo kanye nabasubathi. Kuyaziwa emhlabeni jikelele ngemidlalo yegalofu, i-tennis, umjaho wezimoto, kanye nemidlalo yezamanzi. Amabhishi amaningana eFlorida anamanzi asogwini namabala emibala e-emerald.Ngxenye yezingxenye ezimbili kwezintathu zeFlorida ithatha peninsula phakathi kweGulf of Mexico nolwandle i-Atlantic Ocean. IFlorida inogu olude kakhulu e-United States, cishe amakhilomitha angama-2,170, ngaphandle kokufaka umnikelo weziqhingi eziningi ezivimbayo. IFlorida ineziziqhingi ezingama-4,510 ezingamahektare ayishumi noma zinkulu endaweni. Lesi yisibalo sesibili esikhulu kunazo zonke zeziqhingi zanoma imuphi umbuso; i-Alaska kuphela enokuningi. Yiso kuphela isimo esisemngceleni weGulf of Mexico kanye nolwandle i-Atlantic. Iningi lesifundazwe lisesezingeni lolwandle noma eliseduzane futhi libhekene nenhlabathi yedaka. IFlorida inendawo ephansi kakhulu yanoma isiphi isimo saseMelika. I-alligator yaseMelika, ingwenya yaseMelika, i-flamingo yaseMelika, isipuni seRoseate, iFlorida panther, i-botnose dolphin, ne-manatee kungatholakala e-Everglades National Park engxenyeni eseningizimu yombuso. Isimo sezulu siyahlukahluka ngokwasentshonalanga nenyakatho kuya ezishisayo eningizimu. Kanye neHawaii, iFlorida ingesinye sezifundazwe ezimbili ezinesimo sezulu esishisayo, futhi ukuphela kwesifundazwekazi esinendawo yesimo sezulu esishisayo kanye nohlanga lwamakhorali. IFlorida Reef iyodwa ukuphela kwekhithi le-coral barrier barrel e-United States yezwekazi, kanye nohlelo lwesithathu lwamakhorali ngobunzima emhlabeni (ngemuva kweGreat Barrier Reef neBelize Barrier Reef).